Florentino Perez oo sharaxaad ka bixiyay qaabka uu Ronaldo kaga dhaqaaqay garoonka Santiago Bernabe – Gool FM
Florentino Perez oo sharaxaad ka bixiyay qaabka uu Ronaldo kaga dhaqaaqay garoonka Santiago Bernabe
(Real Madrid) 21 Sab 2018. Madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa ka hadlay qaabka uu Cristiano Ronaldo kaga dhaqaaqay garoonka Santiago Bernabe suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay, kadib markii uu Juventus ugu dhaqaaqay 100 milyan euro.
Los Blancos ayaa xili ciyaareedkii lasoo dhaafay dhamaadkiisa la kulantay laba xaaladood ee naxdin leh, kuwaasoo kala ah in ay ka wada dhaqaaqeen Zinedine Zidane iyo Cristiano Ronaldo.
Hadaba madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Perez ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta uu u aqbalay in Cristiano Ronaldo uu ku baxo qiima lacageed ka yar inta lagu kansali karay qandaraaskiisa sida ku xusnaa heshiiska.
“Shuruudaha lagu kansali karo heshiisyada ciyaartoyda kooxda Real Madrid, ma ahan lacag bixin ee waa caqabad”.
“Heshiiska ugu weyn ee sanadkaan wuxuu ahaa heshiiskii Cristiano, marka waxaan aaminsanahay in waxa dhacay ay ahaayeen wax inoo fiican dhamaanteen”.
“Ma jirin koox u soo bandhigtay Real Madrid dalab ka badan 100 milyan euro, mana aanan heysan dalabyo badan ee ku aadan dhanka Cristiano Ronaldo”.
Kabtanka kooxdii ay Xalay Arsenal la ciyaartay Europe League oo sameeyay wax aad looga ASH ASHO....(BAL DAAWO)